Ungasibhala njani isiphelo seNtetho
Ngu-Marty Brounstein, Malcolm Kushner
Kwiikhathuni ezindala, ubusazi ukuba umboniso uphelile kuba amagama athi Ukuphela afike kwiscreen. Ukuthetha amabinzana anje ngesiphelo, ndigqibile, okanye ayisiyiyo isiphelo sokwazisa ngokusesikweni. La mabinzana awatsho nto kwaye ayeke intetho yakho kunokuba awugqibe. Isiphelo esifanelekileyo sizisa ukuvalwa kwintetho kwaye sikwafuna ifuthe elihlala lihleli. Kuba isiphelo siyinxalenye yokugqibela yentetho, ihlala iyinxalenye abaphulaphuli abayikhumbula ngcono. Ke ufuna ukubashiya nge-bang. Nazi iindlela ezintandathu ezinokukunceda uzise ukuvalwa okuqinisekileyo kwintetho:
Ukuphindaphinda: Impinda sisishwankathelo samanqaku aphambili axoxwe kwintetho yakho. Uyayifuna imfutshane, ngokugubungela ngaphezulu kwamanqaku amathathu okanye amane. Ukuba ugubungela ngaphezulu kunoko, uya kuthi ufumane iinkcukacha, ulahlekelwe ngabaphulaphuli, kwaye kuvakale ngathi uyaphinda.
Phinda umyalezo osisiseko: Obu buchule buphela kwinkcazo-ntetho yakho ngokugxininisa ngokufutshane kumxholo owuqhubileyo kuyo yonke intetho. Isebenza kakuhle xa intshayelelo yakho iphakamise lo mxholo kwaye ufuna ukuwusonga ekugqibeleni.
Biza isenzo: Ngale ndlela yokuvala, ugqiba ngokucela ukuba abaphulaphuli bathathe isenzo. Elo nyathelo linokufezekisa uluvo abalufumene kwintetho yakho okanye ngokwenza into ukuxhasa injongo.
Isiqendu: Obu buchule busebenza kakuhle xa unokuza nobungqangi okanye umgca onomdla osongela intetho yakho kakuhle. Njengoko usenza kwintshayelelo, ufuna ukufumanisa umthombo wesicatshulwa kwaye ubophe kwindawo yakho ephambili.
Umbuzo-buciko: Kule ndlela, ushiya abaphulaphuli ngombuzo ocinga. Rhoqo, awuyiphenduli ngokungathi ubuya kwenza kwintshayelelo; Endaweni yokuba ubashiye bazikhathaze ngombuzo ngokwabo. Njengakwintshayelelo, qiniseka ukuba umbuzo uhambelana nale nto uyithethileyo ukuze abantu bashiye intetho bacinge, ngakumbi malunga namathuba okanye amathuba.
Ibali: Ibali lihlala lisenza ukuba lisondele kufutshane nomboniso. Ukwenza ibali lisebenze kwisiphelo, ufuna ukuba lifutshane kwaye libonise inqaku elihambelana nento yonke ebingayo.
Ityala: Ifoto © iStockphoto.com/kristian sekulic
yintoni umakhi kwi-python
zingaphi iimiligram ze-ibuprofen
hlaziya i-vista kwiwindows 7 yasimahla
Ngaba vyvanse sisiyobisi
umthamo we-furosemide we-edema
Ngaba inceda i-accutane ngoncedo